Ny atao hoe kernel dia ny "voan'ny" mpandrindra milina. Ny kernel no mitantana ny loharanon-karenan'ny solosaina ary manafaka ny fifandraisan'ny fitaovana sy ny rindrankajy. Manome tontolo iainana avo lenta ho an'ny rindrankajy ny kernel amin'ny alalan'ny famaritana faritr'arika (ary amin'ny fandraràna ny famakiana na fanoratana faritr'arika tsy natokana ho an'ilay rindrankajy), ny fitantanana ny mpikajy, ary fifandraisana amin'ny asa hafa alefa eo amin'ilay mpandrindra milina.
Famaritana amin'ny ankapobeny[hanova | hanova ny fango]
Ny atao heo kernel na voa dia rindrankajy mitantana
Ny fitaovana (arika, mpikajy, kapila mateza, tambajotra, sns.)
Ny fifandraisan'ny fitaovana sy ny rindrankajy
Ny asa mandeha eo amin'ny milina andefasana azy
Ny fifandraisan'ny rindrankajy
Foto-drafitry ny kernel[hanova | hanova ny fango]
Ny asan'ny kernel voalohany indrindra dia mandrindra ny fitaovan'ny solosaina ary ny loharanon-karna ahafahan'ny rindrankajy mampiasa ireo loharanon-karena ireo. Ny atao hoe fitaovana amin'ny ankapobeny dia :
Ny ivon-toerana fikajiana (CPU), ka arak'izany dia toerana manana anjara mavesatra indrindra ao amin'ny rafi-tsolosaina. Miandraikitra ny fandefasana rindrankajy izy io.
Ny ariky ny rafitra izay toerana itahirizana ny baikon'ny rindrankajy ary ny fampahalalana. Mila ao amin'ny arika izy roa ireo vao afaka alefa. Hisy rindrankajy maro no hangataka faritrao ao amin'ny arika, ary matetika hangataka arika betsaka nohon'ny ananan'ny rafitra. Ny kernel no mandidy mikasika ny arika homena ny piraosesy iray, ary mandidy izay tokony atao rehefa tsy ampy arika.
Ireo fitaovana Iditra/Voaka (I/O) izay eo amin'ny solosaina toa ny fitendry, voalavo, kapila mateza, fitaovana USB, mpanaprinty, fikandra, adaptera amin'ny tambajotra, sns.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernel&oldid=691992"
Voaova farany tamin'ny 26 Mey 2014 amin'ny 15:17 ity pejy ity.